बालोन डि‘ओर अवार्ड : नेपालका पत्रकारको ५ भोट क–कसलाई ? – mYKantipur.Com
२०७५, २० मंसिर बिहीबार १९:३५
विराटनगर, मंसिर २० लिओनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोको १० वर्षे लामो दबदबा तोड्दै रियल मड्रिड तथा क्रोएसियाका खेलाडी लुका मोड्रिकले सन् २०१८ को बालोन डि‘ओर अवार्ड जिते । उनले ३ दिनअघि फ्रान्समा एक कार्यक्रमबीच सो अवार्ड थापे ।
अहिले बालोन डि‘ओर अवार्डमा क–कसले कुन–कुन खेलाडीलाई भोट दिए भन्ने विषय विश्वभरि नै चर्चामा छ । फ्रान्स फुटबलले यस अवार्डका लागि विश्वभरका जम्मा १ ८० देशका एक–एक जना पत्रकारलाई भोट गर्न लगाउँछ । सोही भोटिङबाट सबैभन्दा बढी अंक पाउने खेलाडीले बालोन डि‘ओर जित्छ ।
अवार्डका लागि जारी गरिएको अन्तिम ३० खेलाडीको सूचीमा परेका जम्मा ५ जना खेलाडीलाई भोट गर्ने अधिकार पत्रकारलाई दिइएको हुन्छ । उनीहरूले १, २, ३, ४ र ५ गरेर प्राथमिकतामा आधारमा नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ ।
जसमा पहिलो नम्बरका खलाडीले ६ अंक पाउँछन् भने दोस्रो नम्बरकाले ४ अंक पाउँछन् । त्यसपछि तेस्रो नम्बरकाले ४ अंक पाउँदा चौथो नम्बरकाले २ र पाँचौं नम्बरका खेलाडीले १ नम्बर पाउँछन् ।
नेपालबाट भने बालोन डि‘ओर अवार्डका लागि कान्तिपुर दैनिकका खेल पत्रकार राजु घिसिङले भोट गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि उनले सो अवार्डका लागि भोट गरे । उनले आफ्ना ५ भोट क–कसलाई दिए होलान् ?
नेपालबाट प्रतिनिधि भोट गर्ने पत्रकार राजुले यसपटक बालोन डि‘ओर अवार्डका लागि मेस्सी र रोनाल्डोलाई भोट दिएका छैनन् । उनले सबैभन्दा पहिलो नम्बरको भोट लुका मोड्रिकलाई दिएका छन् । उनले दोस्रो नम्बरको भोट भने फ्रान्सका एन्टोनी ग्रीजम्यानलाई दिएका छन् ।
त्यस्तै, उनले तेस्रो नम्बरको भोट बेल्जियमका इडेन हाजार्डलाई दिएका छन् भने चौथो नम्बरको भोट फ्रान्सका केलियन एमबाप्पेलाई दिएका छन् । उनले अन्तिम पाँचौं नम्बरको भोट उरुग्वेका डिएगो गोडिनलाई दिएका छन् ।
गोडिनले बालोन डि‘ओरमा मात्रै १ भोट पाएका छन्, जुन नेपालबाटै गएको भोट हो । यसबाहेक उनलाई विश्वका कुनै पनि पत्रकारले भोट गरेका छैनन् ।